Echo Boomers (2020) | MM Movie Store
ဒီဇာတျလမျးလေးက လူငယျလေးတှအေကွောငျး အထူးသဖွငျ့(၁၉၈၁)ကနေ(၁၉၉၆)ကွားမှေးဖှားခဲ့တဲ့Generation Y ဒါမှမဟုတျ Millennials တှအေကွောငျးကို ဦးတညျရိုကျထားတဲ့ကားလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ကွိုးစားရိုးသားပွီး ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးနဲ့တရားဝငျအလုပျကိုလုပျခငျြခဲ့ပမေဲ့ စီးပှားရေးစနဈဆိုးကွောငျ့ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈ နခေဲ့ရတဲ့ ကောလိပျကြောငျးသားတဈစု၊ ခမျြးသာတဲ့လူလကျတဈဆုပျကပဲထပျပွီးခမျြးသာနတေဲ့စနဈဆိုးကွောငျ့ သူတို့နခေငျြခဲ့တဲ့ဘဝကိုနခေငျြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုငျးမနခေဲ့ရတဲ့လူငယျတဈစု၊
ခြီကာဂိုကအခမျြးသာဆုံးဆိုတဲ့လူတှရေဲ့အိမျကိုဝငျ ပွီးပစ်စညျးတှကေိုခိုးယူပွီးတေ နခေငျြခဲ့တဲ့ဘဝကိုဖနျတီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့……..ဒီဇာတျကားလေးထဲကအကွောငျးအရာ တှကေ လူငယျတှရေဲ့ခံစားခကျြ လူငယျတှရေဲ့ဘဝကိုဖှငျ့ဟပွနတေဲ့ဇာတျကားတဈကားဖွဈလို့ ထုံးစံအတိုငျးလေးပဲကိုယျတိုငျ ကွညျ့ရှုခံစားဝဖေနျကွညျ့ကွပါအုံးလို့……….
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက လူငယ်လေးတွေအကြောင်း အထူးသဖြင့်(၁၉၈၁)ကနေ(၁၉၉၆)ကြားမွေးဖွားခဲ့တဲ့Generation Y ဒါမှမဟုတ် Millennials တွေအကြောင်းကို ဦးတည်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုးစားရိုးသားပြီး ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့တရားဝင်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ဆိုးကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် နေခဲ့ရတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်စု၊ ချမ်းသာတဲ့လူလက်တစ်ဆုပ်ကပဲထပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့် သူတို့နေချင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုနေချင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမနေခဲ့ရတဲ့လူငယ်တစ်စု၊
ချီကာဂိုကအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ကိုဝင် ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတေ နေချင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့……..ဒီဇာတ်ကားလေးထဲကအကြောင်းအရာ တွေက လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက် လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုဖွင့်ဟပြနေတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လို့ ထုံးစံအတိုင်းလေးပဲကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခံစားဝေဖန်ကြည့်ကြပါအုံးလို့……….
The Heir (2013) ၊ အပိုငျး (၆)